:: My Little World ::: 20111104
Posted by Nay Nay Naing at 11/04/2011 10:14:00 AM
ဟုတ်တယ်..ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ဆိုရင် ပျော်တယ်.. မြန်မာပြည်မှာနေစဉ်တုံးက ရုံးပိတ်ရက်ကို သိပ်တန်ဘိုးမထားပေမဲ့ အခု အလုပ်ဘဲ လုပ်နေရတဲ့ နိုင်ငံရောက် မှ vacation တို့ holidays တို့ ကို အလွန် တရာ မှ တန်ဘိုးထား မျှော်လင့်တတ်လာတယ်.. Happy Holidays.
Sunday, November 06, 2011 11:22:00 PM
ဘိန်းမုန့်နဲ့မုန့်လင်မယား လုပ်နည်းလေးသိရင်မျှဝေပေးပါ။ kyarzoe@gmail.com ကိုပို့ပေးပါ။ ဘလော့ပိုင်ရှင်
(သို့) စာရှုသူမည်သူမဆိုကြိုဆိုပါတယ်။ Thanks in advance.
Monday, November 07, 2011 12:30:00 PM